Ithegi: ukugcwala kwetrafikhi | Martech Zone
Ithegi: ukugcwala kwetrafikhi
Inyani yile yokuba awuthengisi kumajelo eendaba ezentlalo kodwa unokuvelisa ukuthengisa kwimithombo yeendaba ukuba uphumeza inkqubo epheleleyo yokuphela. Inkqubo-sikhokelo yethu ye-PRISM 5 yinkqubo onokuyisebenzisa ukuphucula ukuguqulwa kwemithombo yeendaba. Kweli nqaku siza kucacisa isikhokelo samanyathelo ama-5 kunye nezixhobo zemizekelo onokuyisebenzisa kwinyathelo ngalinye lenkqubo. Nantsi i-PRISM: Ukwakha i-PRISM yakho
Kutheni sifuna ukuthengisa umxholo? Lo ngumbuzo abantu abaninzi kolu shishino abawuphenduli kakuhle. Iinkampani kufuneka zibe nesicwangciso esomeleleyo somxholo kuba uninzi lwenkqubo yokwenza isigqibo-sokuthenga itshintshile, enkosi kumajelo eendaba akwi-Intanethi, ngaphambi kokuba ithemba lifikelele kwifowuni, impuku, okanye umnyango wangaphambili kumashishini ethu. Ukuze sibe nefuthe kwisigqibo sokuthenga, kunyanzelekile ukuba siqinisekise ukuba uphawu lwethu lukhona